Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zohambo lweSanta Lucia » I-Saint Lucia inciphisa iiprotokholi ezisesiqithini zabahambi abagonywe ngokupheleleyo yi-COVID-19
Abahambi abagonywe ngokupheleleyo ngoku banokubhukisha iimoto eziqeshisayo, batye kwiindawo zokutyela ezingaphezulu, kwaye bathathe inxaxheba kwimisebenzi eyongezelelweyo enje ngokuloba elunxwemeni, lonke elixa bejonga iiprotocol ezikhoyo kwesi siqithi.
Abahambi abagonywe ngokupheleleyo banokonwabela amathuba amaninzi okufumana amava esiqithi sonke
Iindwendwe ezigonyiweyo ngoku ziye zanda ukufikelela kuzo zonke iindawo ze Seyint Lushiya ukusukela ngomhla wokufika
Nokuba uthini na ngesithuba sokugonya, akukho lutshintsho lwenziweyo kwiinkqubo zangaphambi kokufika kwabahambi
Urhulumente wase-Saint Lucia ubhengeze ukuba nge-31 kaMeyi ka-2021, i-COVID-19 yabahambi abagonyiweyo banokonwabela amathuba amaninzi okufumana isiqithi sonke.
Iindwendwe ezigonyiweyo ngoku ziye zanda ukufikelela kuzo zonke iindawo ze Seyint Lushiya ukusukela ngomhla wokufika ngaphandle kwezithintelo kunye nokuvalelwa yedwa kususiwe kubemi ababuyayo abagonywe. Umzekelo, abagonyi abagonyiweyo bayakwazi ukuphonononga iivenkile, iimarike, iivenkile zokutyela kunye nezinto ezenziwayo kwesi siqithi kwiindawo ezaziwayo kubandakanya iCastries, iRodney Bay, iSoufrière nezinye.
Zonke iindwendwe eSanta Lucia zinokuhlala kuluhlu lweendawo zokuhlala eziqinisekisiweyo ze-COVID (iihotele, izindlu zokuhlala, i-Airbnb). Kwaye kubakhenkethi abagonyiweyo, ngoku banokuhlala ngaphezulu kweepropathi ezimbini ukuba bayathanda.
"Kubabini abatyeleli kunye nabahlali bendawo yethu, ukuzibophelela kwethu ekuhlaleni ngokunqabisekileyo nangokufanelekileyo no-COVID kuhlala kuqinile," utshilo u-Hon. Inkulumbuso u-Allen Chastanet. “Ngelixa bonke abatyeleli baseSanta Lucia kungoku nje benokufumana ikhefu elimnandi kunye nokhenketho oluvunyiweyo kunye nezinto ezinomtsalane, abahambi abagonywe ngokupheleleyo ngoku bayamenywa ukuba baphonononge yonke indawo ekuzonwabiseni kwabo, ngelixa belandela imigaqo yethu. Silawule ngempumelelo kwaye ngokukhuselekileyo kwezokhenketho okoko savula imida yethu ngoJuni 2020, kungekho mfuneko yokuvala ngenxa yeeprotokholi zethu kunye nebhola esilenzele iindwendwe zethu kunye nabasebenzi bezokhenketho abaphambili. Kuyasivuyisa ukukwazi ukwandisa amathuba eendawo zokugonya kunye nokunciphisa izithintelo zokubuyela kubemi. Iindwendwe ezigonyiweyo ngoku zinokuhlala njengeholide njengendawo. ”
Ukulungela ukugonywa ngokupheleleyo, abahambi kufuneka babe nethamo lokugqibela lokugonya i-COVID-19 yokugonya okanye isitofu sedosi enye ubuncinci iiveki ezimbini (iintsuku ezili-14) ngaphambi kohambo. Abahambi baya kubonisa ukuba bagonyiwe ngokupheleleyo xa begcwalisa ifom yoGunyaziso loKhenketho ngaphambi kokufika, kwaye bafake ubungqina bokugonywa. Ababhenkethi kufuneka bahambe nekhadi labo lokugonya okanye amaxwebhu. Ekufikeni eSaint Lucia, iindwendwe ezibhaliswe kwangaphambili zigonywe ngokukhawuleza ziya kukhawuleziswa ngomnxeba wokujonga impilo kwaye ziya kubonelelwa ngebhanti yesazisi engeyiyo elektroniki ngalo lonke ixesha lokuhlala kwabo. Le bhanti yesandla kufuneka inxitywe kulo lonke ixesha lokuhlala kwaye isuswe xa usuka eSanta Lucia.
Abahambi abangagonywanga bayakuqhubeka nokuvunyelwa ukuba bahlale kwiziza ezibini eziqinisekisiweyo kwiintsuku ezili-14 zokuqala kwaye abemi abangabuyanga bagonyiwe kuya kufuneka benze isicelo sokuvalelwa bodwa kwangelo xesha linye.
Nokuba ithini na imeko yokugonya, akukho lutshintsho lwenziweyo kwiinkqubo zokufika ngaphambi kokuhamba kwabahambi, kubandakanya: bonke abafikayo eSanta Lucia (iminyaka emihlanu okanye ngaphezulu) kufuneka bafumane iziphumo ezibi ze-COVID-19 PCR zovavanyo ezingathathi ngaphezulu kweentsuku ezintlanu (5) ngaphambi kokufika; ngenisa ifom yokuBhalisa uKhenketho kwi-Intanethi; kwaye kufuneka ibambelele kuzo zonke iinkqubo zokhuseleko ezikhoyo, kubandakanya nokunxiba imaski kwiindawo zikawonke-wonke.
Ibhodi yabakhenkethi iAnguilla ichaza iGosa elitsha eliyiNtloko leNtengiso